एक छोटो कथा लेख्न को लागी tips सल्लाहहरु वर्तमान साहित्य
La छोटो साहित्य यो सँधै रहेको छ। यद्यपि हालसालैका वर्षहरूसम्म यस्तो छैन जब सामाजिक नेटवर्कलाई धन्यवाद, माइक्रो स्टोरी जस्ता विधाहरू नयाँ सुनौलो युगमा जागी भए। कथाहरू एक वा दुई पदहरूमा सारांशित गरियो जुन पाठकको कल्पनाको साथ खेल्ने साहित्यका लागि नयाँ ढोका खोल्दछ। साथै एक सौंदर्यको साथ जुन एक निश्चित रहस्यलाई प्रेरित गर्न कोसिस गर्दछ तर सबै भन्दा माथि, प्रभाव पार्ने। यदि तपाईं पनि यी लागू गर्नुहुन्छ छोटो कथा लेख्नका लागि5सल्लाहहरू, विजय निश्चित छ।
1 संक्षिप्त हुनुहोस्
2 एक अवस्था सम्बन्धित छ
3 इलिप्सिस प्रयोग गर्नुहोस्
4 शब्दहरु संग खेल्नुहोस्
5 एक राम्रो शीर्षक
जस्तो यसको नामले सts्केत गर्दछ, छोटो कथालाई कथा भन्दा धेरै ठूलो संक्षिप्तता चाहिन्छ। जेनरेशनका उपायहरू समय बमोजिम केही व्यक्तिपरक भएका छन् (विभिन्न परिच्छेदहरू सहितका कथाहरू), माइक्रो-कहानीको प्रकृति सकेसम्म धेरै शब्दमा एक महान कथा बताउनुहोस्.
एक अवस्था सम्बन्धित छ
तपाईको दिमागबाट यस ग्रहको लोप हुनको लागि आश्वासन र भ्रमले भरिएको ग्रहबाट उम्कनुभयो। #LettersofYemh
Yineisy मोटा (@yemh) द्वारा साझा एक पोस्ट अगस्ट 31, 2017 मा 2: 42AM पीडीएफ
उपन्यास एक विचार लम्बाई र यो अन्य subplots साथ पूरक को विशेषता हो, जबकि कहानी एक विशिष्ट स्थिति पुन: निर्माण। यदि उपन्यासले चन्द्रमामा नपुगुन्जेल एक अन्तरिक्ष यात्री हुन चाहने केटाको लामो जीवन बताउँछ भने, कथा उहाँ आइपुग्दा, वा तारामा उडान गर्ने निर्णय गर्दा त्यो क्षण कभर हुनेछ। माइक्रो स्टोरीले कहानी जस्तो समान कार्य गर्दछ, तर कम शब्दहरूका साथ। बारेमा यति स्पष्ट बिना नै परिस्थिति सम्बन्धित छ.
इलिप्सिस प्रयोग गर्नुहोस्
इलिप्सिस एक बयानात्मक आकृति हो जसले लेखोटबाट शब्दहरू हटाउँछ जुन आफैंमा बुझिन्छ। एक आवश्यक सहयोगी जब यो केहि छोटो मा गहिरो कहानी कन्सेंसिंग गर्न आउँछ। छोटो कथा सूक्ष्मता प्रयोग गर्दछ, कथाको माध्यमबाट निश्चित रहस्य कायम राख्नुहोस् जुन त्यो कथाको सार सारांश दिन्छ, सीधा यसको चरमोत्कर्षमा जान्छ।। उदाहरण को लागी, यदि दुई चरित्र फिर्ता आयो र जीवनकाल को लागी एक अर्कालाई माया गर्छौं भन्ने महसुस गर्न को लागी, एक "धेरै टाई र टाई पछि, गाँठ बलियो भयो" पर्याप्त हुनेछ। उदाहरण को लागी।
शब्दहरु संग खेल्नुहोस्
Al Ajuar »@albertopiernas द्वारा हामी ओछ्यानमा चम्चा बनायौं। जब म ब्यूँझन्छु म फेरि मासु भएर जान्छु र तपाईं चक्कु हुनुहुन्छ। यो कथा हाम्रो वेबसाइट मा पोस्ट गरिएको थियो। यदि तपाइँ हामी तपाइँको कुनै प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ: हामीलाई http://www.microcott.es मा पठाउनुहोस्
Microuenta.es (@ microuenta.es) द्वारा साझा गरिएको पोष्टमा सेप्टेम्बर 1, 2017 मा 1: 02pm पीडीएफ
तपाईं ग्रडिंगको बारेमा कथा लेख्न खोज्दै हुनुहुन्छ र यस कथामा भएका शब्दहरू फेला पार्न गाह्रो लाग्दछ जुन यसको सारांश दिन्छ। त्यस कारणका लागि, वा कम्तिमा मेरो मामलामा, म एक छविको साथ आउन सक्छु, जुन आफैंमा बाँकी सामग्रीलाई उत्प्रेरित गर्दछ: त्यो छविले तपाईमा कस्तो भावना जगाउँछ? यसले कुन इतिहास समावेश गर्दछ? अन्य समय, एक शब्द ती अन्य लाई आकर्षित गर्न को लागी लेखन निर्माण गर्न को लागी पर्याप्त हुन सक्छ। उदाहरणको लागि, "प्रकाश" शब्दहरू "फायरफ्लाइहरू", "अँध्यारो", "सूर्य" जस्ता आकर्षित गर्दछ ... ती सबैसँग खेल्नुहोस्, किनभने सबैभन्दा पहिले, छोटो कथा सधैं रूपक स्वागत गर्दछ.
एक राम्रो शीर्षक
कर्फ्यू, ओमर लारा द्वारा
"रहनुहोस्," मैले उनलाई भने।
र मैले उनलाई छोएँ।
हाम्रो कामको लागि उत्तम शीर्षक फेला पार्न प्राय: हामीलाई माइक्रो-स्टोरी आफै लेख्न भन्दा बढि समय लाग्यो। यद्यपि धेरै पटक शिर्षकले थप कथा थपेर वा योको अर्थ समाप्त गरेर कथा पूरक हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, अद्भुत "कर्फ्यू"।
के तपाईं हामीसँग माइक्रो स्टोरी किन्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » धेरै » छोटो कथा लेख्नका लागि5सल्लाहहरू